MYMC Playlist: အဝေးကချစ်သူ | Myanmar Mp3 Album
Home / 2011 / May / 30 / MYMC Playlist: အဝေးကချစ်သူ
ဒီ Playlist ကတော့ ရေခြားမြေခြားက ချစ်သူကိုသတိရတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ကိုထားပြီး အဝေးထွက်သွားတဲ့ချစ်သူကို ပြန်တမ်းတတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခံစားချက်သီချင်းလေးတွေကို စုစည်းပေးထားပါ။ Pop နဲ့ R&B သီချင်းအများစု ထည့်ထားတာကြောင့် ကြိုက်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။
၁။ စလုံးကချစ်သူ –9One
၂။ လေပြေ – အေသင်ချိုဆွေ
၃။ မင်းနားမှာနေချင်တယ် – Air Air | MHL
၄။ တိမ်တွေလို – Cosy
၅။ လမင်းသို့ – အောင်ကောင်းထက် | ရေဗက္က၀င်း
၆။ မင်းတစ်ယောက်တည်း – Cosy | Blueberry
၇။ အဝေးရောက်ချစ်သူ – D ဖြိုး | David | ဆိုတေး
၈။ Online ချစ်သူ – Freddy | MHL | သူရ | ဇေရဲ
၉။ မင်းကိုငါချစ်တယ် – ဟဲလေး | ဒီယံ
၁၀။ မဖြစ်နိုင်ဘူး – လွှမ်းပိုင်
၁၁။ Congratulation – ထိန်ဝင်း | သားကြီး
၁၂။ The Day You Will Come Back – MHL | သဲချစ်ကို
၁၃။ ရေခြားမြေခြားချစ်သူ – Rock$tar
၁၄။ Goodbye – စိုင်းစိုင်း
၁၅။ Saryonaya – စောညီညီ | မိုးမိုး
၁၆။ သူမနဲ့အိပ်မက် – Snare | သဇင်
၁၇။ မင်းနဲ့အတူရှိချင် – သိန်းလင်းစိုး
၁၈။ တစ်ခါတုန်းက – ရသ | Jenny
၁၉။ မိုးတိမ်ကဗျာ – ရသ | နီနီခင်ဇော်
၂၀။ အဝေးရောက်ချစ်သူ – စိုင်းစိုင်း | Bunny ဖြိုး | ကိကိ
Download လုပ်ဖို့ mediafire
2 thoughts on “MYMC Playlist: အဝေးကချစ်သူ”
Nice songs!!! But i can’t download. I just wanna download two songs , both of “A Way Yout Chit Thu”. I can’t download with mediafire too. Can u give me some advice. If it won’t too difficult for you can u mail this two songs to my mail ([email protected]). Thanks for your kindness.